Saarland University - Yepamusoro Kunze Kwenyika mu Europe, Jerimani
guta : Saarbrücken
Musakanganwa kuti kurukura Saarland University
Kunyoresa pa Saarland University
Saarland University iri ano yunivhesiti mukati Saar-Lör-Lux dunhu - a simba chikamu Europe kududzwa vaiita miganhu pakati Germany, France uye Luxembourg. An maonero remarudzi kwave zvaraireva chepfungwa Saarland University kubvira zvakatanga muna pamwe France muna 1948. nhasi, 18.500 vechidiki vari kudzidza vari Saarbrücken uye muHomburg (rorusununguko mushonga), 17 muzana vacho vari vadzidzi dzakawanda. Munzvimbo yakanaka sango ezvinhu, payunivhesiti ritenderane anopa vadzidzi uye vanotsvakurudza zvakawanda zvemitambo netsika mabasa, izvo pamwe vakawanda cafés uye mumaresitorendi kuti pazvivako nzvimbo yakanaka kuzorora pakati hurukuro kana pashure basa. Uye nemhaka mukuru-nokukurumidza Ice chitima kubatanidza zvinotora maawa maviri bedzi kufamba kubva Saarbrücken kuParis.
Kubvira kwayo, Saarland University akaita kunoonekwa nzvimbo yaro iri pamuganhu German-French somumwe yayo chinosiyanisa unhu. Students anogona, semuyenzaniso, kuwana Europaicum - Gwaro, nemamwe muGermany, zvinoratidza chaizvo uye unyanzvi muzvinhu European. Vanodzidza zvidzidzo zvose zvinogona kupedza chikamu dhigirii chirongwa kwavo kudzidza pane imwe shamwari yedu mumayunivhesiti dzakawanda kuitira kuti vawane miviri-dhigirii. Dzakasiyana-siyana uye vachiravana vakapa inoita vadzidzi kuronga zvidzidzo zvavo yunivhesiti zvinobudirira kusangana dzavo yakananga zvedzidzo uye basa zvinodiwa.
Informatics, Nanotechnology, Biosciences uye Europe ndiwo anokosha nokuranga vari kuumba yeYunivhesiti Profile. The hunoshamisa mukurumbira weDhipatimendi Informatics akanga kunosimbiswa vari National zvedzidzo zvakaisvonaka zvokuita uye hwakawanda externally mari pakutsvakurudza okuvaka mhiri minda zvose Yedzidzo kudzidza zvinosimbisa kunaka zvedzidzo basa richiitwa pane Saarland University.
Vadzidzi vari pamwoyo ose kuyunivhesiti wacho kudzidzisa mabasa. At Saarland University, sezvo panguva mudiwa wedu mumayunivhesiti dzakawanda, zvikuru wanamatira pauzima pokudzora vadzidzi nenhengo emushandi yeYunivhesiti. Kuti musiyano chinokosha kuti vadzidzi yemanyorero nekusangana kuyunivhesiti vakawanda-dzidzo. Uye isu Vanewo chirongwa chekupa mazano umo ruzivo vadzidzi anotsigira nenhungamiro kune-gore rokutanga vadzidzi kubatsira kuderedza yezwi yunivhesiti.
A kembasi yunivhesiti apo zvose yaswedera pedyo zvinoita kuti zvive nyore kuti vadzidzi kuramba uchikurukura nemumwe uye emushandi. Kudzidza neshamwari vari kugamuchira masango kuti inopa rubatsiro chaizvo vadzidzi vari zvimwe zvinhu zvakanaka kudzidza pana Saarland University.
mushonga – Yokungotaura Medicine uye Biosciences
mushonga – Clinical Medicine
Humanities I (History uye Civilization Studies)
Humanities II (Languages, Literature uye Cultural Studies)
Humanities III (Social ndikarangarira Human Sciences)
Natural Sciences and Technology I (Masvomhu uye Computer Science)
Natural Sciences and Technology II (Physics uye Mechatronics Engineering)
Saarland University, wokutanga hwaizogadzwa pashure peHondo Yenyika II, rakaumbwa muna November 1948 achitsigirwa Hurumende French uye pasi auspices paUniversity of Nancy.
Panguva iyo Saarland akawana pachayo iri rinokosha ezvinhu yokuva pamwe zvionera uye kwakabatanidzwa France kubudikidza zveupfumi uye mari mubatanidzwa. With kwayo mubatanidzwa tsika German uye French dzidzo uye mitauro Dual yomurayiridzo, yunivhesiti aiva European maonero kodzero kubva pakutanga. Asati nheyo kuyunivhesiti, navanachiremba ekudzidzisa vadzidzi vezvokurapa panguva hurumende muchipatara muHomburg, Saarland, akanga akatanga January 1946 uye “University Center Yepamusoro Studies pamusoro Hombourg” yakasimbiswa pamusoro 8 Chivabvu 1947 pasi patronage kuti theUniversity pamusoro Nancy. Vadzidzi zvimwe anoranga vanogona kuwana dhigirii certificate kubva mumayunivhesiti.
Mutungamiri wokutanga yakazvimirira yunivhesiti iri 1948 akanga Jean Barriol. Mugore iroro yunivhesiti akasuma mapoka vokutanga mutemo, uzivi uye mitauro.
Munguva 1950s Saarland University akabatana Association of West-German Africa uye akagamuchira mutsva, zvikuru centralized hwesangano mamiriro. The Europa-Institut chinosimbiswa ave zvematongerwo European uye mutemo vanofunga tangi.
mu 1990 simba rorusununguko zvemichina chinosimbiswa. The yunivhesiti zvishoma nezvishoma anowana kutungamirira tsvakurudzo kwemaonerwo mashoko michina.
Unoda kurukura Saarland University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Saarland University musi Map
Photos: Saarland University pamutemo Facebook
Saarland University wongororo
Join kukurukura pamusoro Saarland University.